ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကတ်ကြေးဖြတ်တောက်ဘက်စုံသုံး Herb ကတ်ကြေး-5 ဓါးဖျက်ဆီး
ဤသည်အကြီးစား Duty Herb ကတ်ကြေးသံမဏိဓါး။ အဆိုပါလက်ကိုင်ဆုံးသောင့်သက်သာဆုပ်ကိုင်များအတွက်ဖျ Silicon Line နှင့်အတူကြံ့ခိုင်တောက်ပအစိမ်းရောင်ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်ရှည်လျားသော "ငါး Sharp ကအစုတခုပါရှိပါတယ်။ တစ်သန့်ရှင်းရေး Tool ကိုအဖြစ်နှစ်ဆတဲ့အကာအကွယ် Blade ကိုဖုံးနှင့်အတူပြည့်စုံလာ ။
ကောင်းသော-နုတ်ဆက်ပါတယ်ဆင့်ဆိုရမည်မှာငွီးငှေ့ဖှယျဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ခုတ်ရန်။ သင့်ရဲ့ဓါးကိုပယ်! ပျိုးပင်မီးဖိုချောင်ဟောပြောခြင်းမှာသင်အသုံးပြုရလွယ်ကူဒီပြားနှင့်အိုးပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုက်တစ်လိုလားသူကဲ့သို့သင်၏အစားအစာများအပါအ! ထိုလူအပေါင်းတို့လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ကျန်းမာအကျိုးကျေးဇူးများကိုထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်, ကကြည်လင်ပြတ်သားစွာနှင့်သန့်ရှင်းသောအစာရှောင်ခြင်း-စောင့်ရှောက်ခြင်းအရသာလုပ်ပါ။
ဤသည် Herb ကတ်ကြေးမျှသောကာလ၌ဖြတ်တောက်ခြင်း, ခုတ်ခြင်းနှင့် Mincing ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်စံပြပါ! Basil, စမုန်ဖြူ, ဇီယာစေ့, parsley, Chives, Mint,, စမုနျအများအပြားကပိုပေါ်အကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အနုပညာ & လက်မှုပညာအောင်ဖျက်စီးစက္ကူသို့မဟုတ် ticker တိပ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
1000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
TPR + PP + အက်စ်အက်စ်
စက္ဏူထူနှုန်း 50 PCs
ပျိုးပင်ကတ်ကြေးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြတ်တောက်ပါစေ။ ဒါကြောင့်ကိုချုံ့ဖို့ဒါလွယ်ကူသောကြောင့်, Master အစားအစာများဖန်တီးကိုက်ခြင်း, မျှသာစက္ကန့်အတွင်းသင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အာဟာရအစားအသောက်တွေညှပ်ရန်။
cut, ခုတ်, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် '' အပြည့်အဝအနံ့နှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသော့ဖွင့်ဖို့ပန်းကန်ကျော်ဒယ်အိုးသို့မဟုတ်အပါအသို့ဟင်းသီးဟင်းရွက် mince ။ ရှည်လျားသောလက်ချောင်းများနှင့်အတူနည်းနည်းအစိမ်းရောင်ဖြီးသင်သည်အလျင်အမြန်ဓါးသွားကတဆင့်ရသင်ပန်းကန်ထဲသို့ချင်ဘယ်မှာအားလုံးသင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရသေချာစေသည်။
ငါး Sharp က "ရှည်လျားသောသံမဏိဓါး:
Basil, ဇီယာစေ့, parsley, Rosemary, Chives, Mint,, Cilantro နှင့်အတူသုံးတတ်၏ အသင့်စားဆိုင်အသားသို့မဟုတ်အခြောက်လှန်းအသီးမှို-ပင်, ကြက်သွန်နီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်
ဆီလီကွန်ထက် သာ. ကောင်း၏, အ TPR အတွင်းပိုင်းလက်ကိုင်တစ်ဦးအဆင်ပြေပျော့ချုပ်ကိုင်ထားပေးပါသည်။ လက် tool ကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်မှု, TPR အလင်းအလေးချိန်, ပျော့ပျောင်းသောထိတွေ့မှု, Anti-ပွန်းစားခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းသည်။ သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါအဆိုပါဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖုံးသင့်ရဲ့ပျိုးပင်ရှုး၏ငါးဓါးသွားကိုကာကွယ်ပေးသည်
သန့်ရှင်းရေးမှတစ်ဦးသန့်ရှင်းရေး Tool.Easy အဖြစ်နှစ်ဆသောအကာအကွယ် Blade ကိုဖုံး, ဓါးသွားဖက်တွယ်မဆိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ကွာတိုက်။
Basil, ဇီယာစေ့, parsley, Rosemary, Chives, Mint,, Cilantro သည် ဖြစ်. , ကြက်သွန်နီ, မှိုနှင့်အတူအကျင့်ကိုကျင့်
အနုပညာ, လက်မှုပညာ, နဲ့ထည် shredding သို့မဟုတ်စက္ကူများအတွက်
မင်္ဂလာဆောင်, ရေချိုးခန်း, အိမ်ရှင်မ, housewarming, မွေးနေ့နှင့်အားလပ်ရက်လက်ဆောင်များများအတွက်
သင်ဤ Herb ကတ်ကြေးအကြောင်းပိုမိုဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ
ထိုကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းအရသာတစ်လှည့်ကွက်ပေးဒါပေမယ့်လည်းအံ့သြဖွယ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးလိမ့်မည်သာ။ သင့်ရဲ့စားဖိုမှူးအသိမှတ်ပြုပျိုးပင်ရဟတ်ယာဉ်မည်သည့်ပန်းကန်ပေါ်ဤအကြောင်းရောဂါ-တိုက်ခိုက်နေဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်နံ့သာမျိုးကိုပြင်ဆင်နေများအတွက်အကောင်းဆုံး gadget ကဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီ, စမုန်ဖြူ, ပညာရှိ, oregano, chives နှင့်အနံ့နှင့်အတူစိမ်းဖြင့်တစ်ဦးသင်တန်းစေမည်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အရသာရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့ဟင်းလျာများအပေါ်ပူစီနံ။ အဆိုပါသဘာပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းသင့်ရဲ့စာရွက်၏အရသာကိုအပေါ်ကွာခြားချက်တွေအများကြီးပေးလိမ့်မယ်။
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ CONFETTI နဲ့အတူ 2.CELEBRATE!
လက်ျာဘက်ပန်းကန်များနှင့်အိုးပေါ်သို့ဿုံအရွယ်အပိုင်းပိုင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုက်။ အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်ကဲ့သို့ပင် - finesse နှင့်အတူအပါအ! သင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအထင်ကြီး။ ဒါပေမဲ့ကတ်ကြေးဖြတ်တောက်သင့်ရဲ့လိမ္မာပါးနပ်သောပျိုးပင်ဖုံးကွယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အိမ်ကသူတို့ကိုယူလိမျ့မညျ!
manual Herb Grinder, Spice စက်, Shredder Chopper
manual Herb Grinder-Spice စက်-Shredder Chopper-သစ်သီးဟင်းသီးဟင်းရွက် Cutter ♦အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်ခုတ်သို့မဟုတ် mince ......
strip ကိုက်လန်, တွေ့ရပုံ, Collard ဂရင်းနှင့် Herb Stripper
strip ကိုက်လန်, တွေ့ရပုံ, Collard ဂရင်းနှင့် Herb Stripper ♦မြှောင်ကိုက်လန်, collards, တွေ့ရပုံနှင့်ပျိုးပင် ......
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကတ်ကြေးဖြတ်တောက်ပျိုးပင်ကတ်ကြေး-5 ဓါးဖျက်ဆီးဒီအကြီးစား Duty ပျိုးပင်ကတ်ကြေးတစ်ဦးပါရှိပါတယ် ......
manual ဆားငရုတ်ကောင်းကြိတ်ဆားစက်ငရုတ်ကောင်းစက်ဒီငရုတ်ကောင်းကြိတ် grinder ကြမ်းကိုဖွင့်ဖို့ cranking လွယ်ကူသည် ......
ကြွေထည်ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း Shakers,3ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းသေတ္တာကလေး၏သတ်မှတ်မည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူကြွေထည်ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း Shakers,3ဆားသတ်မှတ်ရန်နှင့်ငရုတ်ကောင်းသေတ္တာကလေး Spice တက်သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင် ......